ECO AQALKA "WADAN": BEY'AD ISBOORTI, KHAFIIF AH, OO LA QAADO - DHISMAYAASHA
Barafka hore, iyo isla markiiba ka dib markii uu barafoobay, duufaan dayr ah, barafka ugu horeeyay ee dhacay xilli dambe, waxa la yidhaahdo: Nolosha degganaanta xagaaga waxaa ka buuxa wax la yaab lehlaakiin mar kasta ma aha mid cajiib ah oo cajiib ah.
Iyo haddii aad waxay rabaan inay ilaaliyaan geedahaaga laga bilaabo xayawaanka dabiiciga ah, waxaan soo jeedinaynaa in ay isticmaasho aqalka dhirta "Dachny".
Tani waa naadi aad u habboon, naqshad iyo naqshad. wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si dhakhso ah iyo dadaal la'aan mararka qaarkood si loo kordhiyo beergooyska dalka.
Inkasta oo ay muddo dheer ogaatay in dalagyada waxsoosaarkoodu ay tahay natiijo ka timid shaqo adag iyo shaqo adag, waa ku filan tahay in lagu rakibo aqalka dhirta lagu koriyo si loo hubiyo: intaad ku raaxeysanayso nasasho sharci, wuu shaqayn doonaa.
Sidee buu u kaco aqalka dhirta "Dachny"?
Aqalka dhirta lagu koriyo ayaa kuu ogolaanaya inaad abuurto microclimate ku haboon dhirta: adduunka oo aan lahayn cayayaanka, iyada oo aan roobab duufaan ah iyo heerkulka khatarta ah dhibco.
Tani waxay suurtagal tahay sababtoo ah cirifka gaarka ah "Agrotex42". Si ka duwan galaaska, waxay u oggolaaneysaa qoyaanku in uu gudbo.
Waxyaabahaan kiimikada waxyeeli ma laha gudaha gudaha. Wuxuu si joogto ah u hayaa heerkulka joogtada ah: maalintii 5-10, habeenkii - 1.5-3 C).
Waa maxay Agrotex? Tani waa:
bey'ada u fiican;
aan la taaban;
Waxyaabaha la ilaaliyo UV.
Greenhouse "Country" ayaa sidoo kale kaa badbaadin doona dhibaatada aan loo baahnayn ee gaadiidka. Ka dib dhan, Agrotex waa wax fudud..
Taas bedelkeeda, xayndaabyada caagga ah ee shaxanka waxaa lagu daboolay walxo kiimiko ah. Tani waxay noo ogolaanaysaa inaan sheegno kalsooni taas naqshadeynta ayaa kugu sii wadi doonta waqti dheer. Dhexdhexaadiyaha tubada waa 20 mm.
Waa maxay dhirta ay ku raaxeysanayaan halkan?
Isticmaalka aqalka kuleylka waxay u ogolaaneysaa kordhinta dhalidda dhaqanka wadan kasta. Laakiin mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee Agrotex waa awooda diirimaad wakhti dheerinkastoo ay jiraan waxyaabo dibadda ah.
Taasi waa sababta ay ugu fiican tahay in la isticmaalo koriyo si loo ilaaliyo dhirta aan u dulqaadan heer kulka.
Xagee laga dhigaa?
Xididdada koritaanka ee dhulka? Iska daa, tani maaha isaga. Eco aqalka "wadan" - wax la mid ah teendho raaxo leh waayo, farcankiinnu waa cagaar.
Uma baahnid aasaaska dheeraadka ah (cirifka si fudud u wadida dhulka) waxayna ka haajiri karaan hal dhibic oo beertaada ah mid kale.
Si taxadar leh u daryeeli beertaada iyo beertaada, waayo waxaa si cad loo og yahay in dhirta ay jecelyihiin kor u qaadeen milkiilaha ay soo saaraan dhowr jeer miro badan. Waxaan kuu rajeyneynaa gu'ga xilliga guga iyo wax soo saarka wanaagsan..
On gallery gallery dhirta "Dachny":